LG inokwanisa kuwedzera chigunwe chigunwe pachiratidziri | IPhone nhau
Iyo yekutanga kambani kuvhura smartphone ine chigunwe chigunwe sensor yaive apuro Motorola. Gare gare, vamwe vagadziri vanga vachisvika izvo zvakare zvakawedzera mashandiro akadai seApple, Samsung uye LG, Sony yaive imwe yemakambani ayo akatora nguva refu kwazvo kuishandisa neXperia Z5. Mumwe mugadziri isa ino sensor yeminwe mune imwe nharaunda yechigadzirwa. Apple inoishandisa pane bhatani repamba riri pamberi pechishandiso senge Samsung. Vamwe vagadziri vanosarudza kuiisa kuseri kwechigadzirwa, chimwe chinhu chandisingaone chinoshanda kana kugadzikana kana uchizarura mudziyo. Sony, pachikamu chayo, inoisanganisira parutivi rwechigadzirwa, panowanikwa bhatani rekudzima skrini.
Mazhinji ndiwo mazano anotenderera mumasvondo apfuura nezvekuti inotevera iPhone ingave sei. Vamwe vavo vanoedza kutiratidza mudziyo une chidzitiro chinovhara kumberi kwese zvechigadzirwa chinhu chingave chakakodzera asi chingaita kuti bhatani repamba riendeswe kune chimwe chikamu chechigadzirwa kunze kwekunge chakabatanidzwa muchiratidziri, chimwe chinhu chairatidzika kunge chisingaite munguva pfupi.
Pero parece que kana zvichikwanisika kusanganisa iyo yeminwe yekunzwa muchivhariso, zvirinani sekuratidzwa ne LG. Iyo Korean firm yakwanisa kuisa 0,03-millimeter sensor pachiratidziro che smartphone. Iyi tekinoroji yakabhabhatidzwa izita rekuti LG Innotek inobvumidza vese vagadziri, kwete Apple chete, kutora mukana weiyo furemu yechishandiso nekuwedzera imwe skrini, uye kubvisa bhatani repanyama iro rinogona kunge riri kupinda kwemvura neguruva zvinogona kukuvadza mudziyo kushanda zvakafanana.
Mutauriri wekambani akataura kuti LG yatove iri mukukurukurirana nevatengi vakasiyana vezvigadzirwa ndiani anoda kutanga kushandisa aya matsva macrini neiyo yakasanganiswa sensor kuti avatange iwo pamusika gore rino. Apple ichave imwe yadzo here? Mumwedzi ichangopfuura, zvakawanda zvakataurwa nezvesikirini nyowani izvo iPhones dzeramangwana dzichaita, iine OLED tekinoroji uye kuti yaizogadzirwa neese maviri Samsung uye LG. Zvinoenderana naTim Cook gore rino iyo iPhone nyowani ichaunza nhau dzakakosha. Ndiye mumwe wavo here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Kupikisana » LG inokwanisa kuwedzera chigunwe chigunwe pachiratidziri
Apple yatove neizvozvo, zvinoitika ndezvekuti inononoka kuiburitsa uye iine iyo muzviratidzo, kutaura zvazviri yave iine patents yeiyo kwemakore, ndizvo zvinoitika kana iwe ukaburitsa patents uye runyerekupe rwekuti makwikwi acho anosvika iwe nekunonoka. Asi ndizvo izvo Apple inoronga kutora muma7 kana 7s, asi nekuti inononoka ndizvo zvinoitika kwazviri, inoda kuchengetedza zvese uye inongotora chinhu chimwe mumhando imwe neimwe uye kwete kana diki diki nekuti zvinoitika zvinoitika izvo zviri pamberi.
nhema, yekutanga smartphone ine chigunwe chigunwe sensor yaive motorola atrix
Chokwadi Hugo, ndakanga ndapasa. Yakagadziriswa.
Kwazisai uye nekutenda kwechinyorwa.
Uye pamberi peyekutanga smartphone ine chigunwe chigunwe, paive ne compaq pda iyo yaunogona kubatanidza foni bhegi neiyo ingangodaro inofanirwa zvakare kutorwa seye smartphone, kureva kuti, kana iyo sensor yaive yakaipa zvakakwana (chaizvo senge Samsung kusvika s6 yasvika)
Iwe unofanirwa kunge uri mutapi venhau uye wopira kuferefeta usati wanyora chimwe chinhu. Nekudaro iwe unotivhenekera iwe neruzivo rwako. Asi chiito chinonyadzisa, kuti iwe hauzive kuti yekutanga smartphone ine chigunwe chigunwe sensor yaive Motorola atrix. Zvakaipa iwe unokwanisa kuwana blog yakadai uye usatore kana kadiki nguva yekutsvaga izvo zvauchazonyora.
Kunyanya kusiri-kuzviisa pasi kuongorora uko kuisa muverengi weminwe kumashure hakuna kugadzikana ... ndinofunga hauna kuzviedza, ini zvakare ndine iPhone, asi kana ndatora smartphone ine chigunwe chekunzwa kana bhatani kumusana , Ndinofanira kuziva kuti yanga yakagadzikana uye ichindibatsira.
Nei zvingave kuti vanhu havana kuziviswa vasati vaburitsa blog. Hugo ari pachokwadi, yekutanga smart foni ine mafinger prints yaive motorola atrix, yaive smart phone ine android. Ndapota vateveri veapuro musachema 😉
Iyi stabilizer ndiyo yekupedzisira chishongedzo kune avo vanoda kurekodha vhidhiyo pane iyo iPhone.